▷ Etu esi lelee egwuregwu Olympic Tokyo 2020 n'efu | Gam akporosis
Etu esi lelee egwuregwu Olympic Tokyo 2020 n'efu
na Egwuregwu Olympic Tokyo 2020 Ha nọ naanị n'akụkụ nkuku na atụmanya dị gburugburu nnukwu egwuregwu a dị elu. Ma ọ bụ na, n'ime ụbọchị ole na ole, a ga-eme ha na Japan, yana ihe niile ememe dị oke mkpa na ịdị ukwuu gụnyere.
Ọtụtụ puku ndị egwuregwu na ndị egwuregwu ga-esonye, ​​na-anọchite anya ọtụtụ mba wee hapụ ọkọlọtọ ha elu. Spain enweela njikere nke ya, yabụ anyị nwere ike ịtụ anya nsonaazụ ọma afọ a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ Egwuregwu Olimpik Tokyo 2020 n’efu, ebe a ka anyị ga-agwa gị otu.
1 Kedu mgbe ha bidoro na mgbe ha kwụsị?
2 Yabụ ị nwere ike ile Tokyo 2020 Olympic Games n'efu
3 Uzo ndi ozo iji hu Tokyo 2020 Olympics
3.0.1 RTVE (Spanish Radio na Television)
3.0.4 Ama egwuregwu.com
4 Spain na Olimpik
4.1 Egwuregwu na ọzụzụ nke Spain ga-esonye
4.2 Ka Spain siri mee n'egwuregwu Olimpik gara aga
5 Nnukwu ndị egwuregwu Spen na-agaghị esonye na Tokyo 2020 Olympics
6 E tinyela egwuregwu 5 ọhụrụ n'egwuregwu Olimpik
Kedu mgbe ha bidoro na mgbe ha kwụsị?
E kwesiri ka asọmpi Tokyo ga-eme n’afọ o ruuru, nke ikpeazụ, n’agbata July 24 na August 9. Otú ọ dị, n'ihi ọrịa ahụ na-efe efe, kọmitii nhazi ga-eyigharị ya ruo ugbu a, n'ihi na e nwere ọnọdụ ka mma n'ụwa niile maka mmepe nke ọrụ ndị a. Ugbu a ndị a Ha ga-ebido n’abali iri abuo na ato n’onwa Julai wee bia n’onwa asato nke asato. N'ime oge ahụ niile, a ga-enwe ọtụtụ egwuregwu na asọmpi egwuregwu, na Spain, dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ, ga-anọ na ọtụtụ n'ime ndị a.
? Gbalịa ọnwa efuEkwela ka ihe ọ bụla si Olympic na ịpị ebe a. Ga-enwe ike ihu ule niile na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ (F1, basketball, football…) na-enweghị ụdị ntinye ọ bụla.
Ee, mmemme a agaghị enwe ndị na-ege ntị dịka ọ dị n’oge gara aga, ihe na-egosi na nsogbu ndị COVID-19 kpatara ka dị taa, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ha belatara site na ọgwụ mgbochi dị iche iche dị ugbu a n'ụwa na ihe ndị ọzọ mere ka ọrịa na-efe efe belata.
Yabụ ị nwere ike ile Tokyo 2020 Olympic Games n'efu
A ga-enwe ọtụtụ ụzọ iji hụ asọmpi Tokyo nke 2020. Agbanyeghị, a na-akwụ ụgwọ imerime mmadụ, n'ezie. Ole na ole bụ ndị nweere onwe ha ma, n'otu oge ahụ, dị mma.
Nhọrọ kachasị mma sitere na DAZN, nke a na-akwụ ụgwọ, mana awade a free ikpe ọnwa na-enweghị adịgide, nke nwere ike ịkagbu n'ụzọ dị mfe n'oge ọ bụla, iji zere ịkwụ ụgwọ ahụ.
Site na nke a ihe omume ga-agbasa. N'otu oge ahụ, a na-agbasakwa egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ gburugburu ụwa, ya mere o zuru oke iji mara ihe niile na-eme n'egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu na ihe niile ga-eme n'ụwa nke ọzụzụ egwuregwu Tokyo 2020 Olympic, yana ọgụ kachasị mkpa n'ịgba ọkpọ, bọọlụ bọọlụ. ndị kacha ewu ewu (Copa) del Rey, Premier League, wdg), bọọlụ basketball, ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, ihe ngosi kwa izu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Zọ ịkwụ ụgwọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu. Nwere ike iji kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ kaadị debit Visa, MasterCard, JBC ma ọ bụ American Express. I nwekwara ike ịhọrọ Paypal, Google Pay, ịkwụ ụgwọ site na Apple ma ọ bụ iji kaadị onyinye DAZN.
Ọnụ ego nke ndenye aha kwa ọnwa bụ euro 9,99. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibute DAZN otu afọ, ịnwere ike ịhọrọ ịkwụ ụgwọ nke euro 99,99, nke ga-atụgharị ụgwọ ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa n'ihe dị ka euro 8,33.
Uzo ndi ozo iji hu Tokyo 2020 Olympics
Ọ bụ ezie na DAZN bụ otu nhọrọ kachasị amasị iji hụ Tokyo 2020 Olympic Games, enwerekwa ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike ịdị mma.
RTVE (Spanish Radio na Television)
Na mbu anyị nwere RTVE (Spanish Radio Television), otu n'ime isi obodo eji ahụ emume na ọtụtụ egwuregwu ga-eme n'egwuregwu Olympic a. Ọ bụ n'efu, ọ ga-ekpuchi mmemme mmeghe na mmeghe, yana ọtụtụ egwuregwu, ọzụzụ, na egwuregwu ndị ga-eme na mmemme ahụ.
Movistar bụ usoro mgbasa ozi ọzọ kachasị na-ekpuchi ihe omume egwuregwu maka Spain. Ọ bụ n'ihi nke ahụ Ọ bụ nhọrọ ọzọ dị mma iji hụ ihe niile na - eme n'egwuregwu, ọ bụghị naanị n'egwuregwu Olimpik, kamakwa n'ihe omume ndị ọzọ, yana bọọlụ mba ụwa, egwuregwu bọọlụ basketball ọkachamara na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ.
E nwekwara Vodafone, nke na-enye ndị ahịa ya Eurosport Player ohere nke ikiri Olympic 2020. Ihe dị mma banyere nke a bụ na o nwere ọwa abụọ, nke bụ Eurosport 1 na Eurosport 2, yabụ ịghara ịhapụ ihe omume egwuregwu ọ bụla, hapụ naanị nsonye na Spain.
Olympic.com bụ otu n'ime isi ntanetị ntanetị na-ekpuchi Olimpik, site na akụkọ banyere ịmata ihe na, n'ezie, egwuregwu na egwuregwu. A na-egosikwa ọtụtụ onyogho, vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ na ibe weebụ a. Ọ bụ ihe ọzọ dị mma ọzọ ịgbaso Olympic. nke mbipụta a.
? Gbalịa ọnwa efu DAZN ma echefula ihe ọ bụla site na 2021 Tokyo Olympics
Spain na Olimpik
Ihe karịrị mba 200 ga-esonye na mbipụta Olympic a na ihe omume 306 nke ọzụzụ egwuregwu 42. Spain, dịka kwa afọ, ga-abịa, na ngụkọta nke ndị na-eme egwuregwu 321 na ndị egwuregwu, nke 184 n’ime ya bụ ụmụ nwoke, nweekwa narị mmadụ atọ na iri atọ na asaa. Saúl Craviotto, ya na onye okacha amara nke miri Mireia Belmonte, g’abụ ọkọlọtọ obodo maka mmemme mmeghe nke Tokyo 137 Olympic Games.
Saúl Craviotto na Mireia Belmonte so na ndị egwuregwu Spen nwere ọtụtụ onyinye na ahụmịhe. Ọ bụ ya mere e ji họrọ ha ka ha nọchite anya ọkọlọtọ n’ebe ahụ. Ha abụọ enweela ike inweta ọtụtụ nrite na asọmpi Olympic gara aga. Ma ọ bụ na onye mbụ esonyela na mbipụta niile nke egwuregwu Olympic n'oge gara aga, kemgbe 2008, nke a haziri na Beijing, China.
Na akụkụ nke Belmonte, o sonyekwala n'ọtụtụ mbipụta nke Olympic, mana ọ bụghị na 2008. Nke a hapụrụ anyị na ọnụnọ ya na 2012, nke emere na United Kingdom, London, na 2016, nke emere na Rio. De Janeiro , Brazil.
Egwuregwu na ọzụzụ nke Spain ga-esonye
A ga-ekesa ọtụtụ narị ndị Spain ga-abụ akụkụ nke ihe omume egwuregwu nke emume a 29 nke egwuregwu 35 na ọzụzụ dị iche iche, n’ime nke anyị nwere ike ịchọta ndị kachasị ewu ewu, dị ka igwu mmiri, ịgba ịnyịnya ígwè, basketball, bọọlụ, ịgba ogige, mgbatị ahụ, ịwụli elu, taekwondo, polo mmiri, tennis (nwekwara tebụl), volleyball, ịgba ụta na ọtụtụ ndị ọzọ.
Fọdụ n'ime ọtụtụ ndị nnọchi anya ga-agba mbọ bulie aha obodo ahụ gụnyere Damián Quintero Capdevila na Sandra Sánchez Jaime (karate), carscar Husillos (egwuregwu), Jon Rahm (golf), Pablo Abián (badminton), Laura Bechdejú (nka), Gabriel Escobar (ịkụ ọkpọ), Alberto Ginés López (ịrị), David Valero Serrano na Jofre Cullell Estapé (ịgba ịnyịnya ígwè), Albert Torres Barceló (track), Beatriz Ferrer-Salat (ịnya anyịnya - dressage) na Jessica Vall (igwu mmiri), n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ kpọkwuo aha.
Ka Spain siri mee n'egwuregwu Olimpik gara aga
Na mbipụta ikpeazụ nke Rio de Janeiro Olympics, nke dị na Na 2016, Spain jisiri ike kpokọta ihe ruru 16, nke asaa bụ ọla edo, ọla ọcha anọ na ọla kọpa isii. Nke a bụ n'ihi na ndị 2012, maka ọtụtụ akụkụ, ejiri ọla edo mee, ebe na United Kingdom, ha adịkarịghị 17.
N'otu aka ahụ, Spain na-achịkwa mgbe niile ịbụ otu n'ime mba nwere ọtụtụ nrite na nsonaazụ ọma na egwuregwu Olympic. Ya mere, a na-atụ anya na mbipụta a ga-eme nke ọma ma ọ bụ karịa ka mma. Atụmanya dị elu, ọ ga-ekwe omume na ndekọ mba ahụ, nke bụ nrite iri abụọ na abụọ enwetara n’egwuregwu Olimpik (ihe mere na Barcelona na 22), nwere ike ịkarị karịa afọ a, dị ka akwụkwọ akụkọ ahụ kwere nkwa.
Nnukwu ndị egwuregwu Spen na-agaghị esonye na Tokyo 2020 Olympics
N'ịbụ otu n'ime ihe omume egwuregwu kachasị mkpa n'ụwa, Spain, yana mba ndị ọzọ sonyere, na-akpọkarị ndị nnọchi anya ha kachasị mma iji lụọ ọgụ siri ike ma merie ebube Olympic. Otú ọ dị, N'afọ a, e nwere ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ndị egwuregwu si Spain ndị na-agaghị anọ na Tokyo, Japan, na 2021 a.
Offọdụ n'ime ha gụnyere onye na-agbachitere ya Sergio Ramos, bụ onye so na otu ndị otu egwuregwu French na PSG (Paris Saint Germain). Ọ gaghị esonye na otu egwuregwu bọọlụ Olympic. Onweghịkwa Ferrán Torres, onye na-agbara otu egwuregwu bekee bụ Manchester City na Brahim Díaz na Borja Mayoral na-akpọ Real Madrid na Roma bọọlụ na Serie A (otu egwuregwu bọọlụ Italiantali).
N'aka nke ọzọ, Spain enweghị ike iru eru na ụdị egwuregwu mmega ahụ, ya mere a ga-ahapụ ndị edemede dịka Inés Bergua, Ana Arnau, Valeria Márquez na ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi afọ ojuju mba na-ekere n'egwuregwu a.
María Torres, onye maara karat kacha mma, agaghị agakwa Tokyo, n’adịghị ka Sandra Sánchez na Damián Quintero, bụ ndị jisiri ike tozuo n’aha Spain, dabara nke ọma.
E tinyela egwuregwu 5 ọhụrụ n'egwuregwu Olimpik
Farisii, Karate, baseball / softball (nlọghachi abụọ a), egwuregwu rịa na skateboarding Anyị ga-ahụ ha n’afọ a na Tokyo Olympic Games 2020. A kwadogoro ndị a ma, ya mere, ọtụtụ ga-abụ ndị Fans nwere mmasị ugbu a ịhụ mbipụta a, ebe ọ bụ na ha bụ otu n’ime omume ndị a na-emekarị na ụwa -abụghị. nke egwuregwu rịa, nke na-adịghị dị ka anọ ndị ọzọ kwuru-.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Etu esi lelee egwuregwu Olympic Tokyo 2020 n'efu
WhatsApp multi-ngwaọrụ, n'ezie? Anyị lelee ya !!
Ngwa kacha mma iji see Anime na gam akporo